Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed oo ka hadlay Isku-dhacyada Soomaalida & Canfarta, Digniin Dadbanna U Diray Masar - Jigjiga Online
HomeSomalidaRa’iisal Wasaare Abiy Ahmed oo ka hadlay Isku-dhacyada Soomaalida & Canfarta, Digniin Dadbanna U Diray Masar
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in dagaal lala galo Masar aanu xal noqonaynin, loona baahan yahay in wax walba wadahadal lagu dhammeeyo, balse haddii ay suurageli weydo uu dalku haysto malaayiin dhalinyara ah oo dagaal geli karta.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya ayaa maanta hortagay baarlamaanka dalkiisa iyada oo ay mudanayaasha baarlamaanku su’aalo ka weydiiyeen arrima badan oo ku saabsan xaaladda dalka Itoobiya uu ku sugan yahay.
Arrimaha wax laga weydiiyay waxaa ka mi ah xiisadda Masar iyo Itoobiya ka dhex taagan, xorriyadda saxaafadda, dorashooyinka, nidaamka federaalka, arrima la xidhiidha siyaasadda iyo bulshada Itoobiya.
Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey xaaladda ka dhex taagan Masar iyo Itoobiya ee la xiriirta muranka ka dhashay biya xireenka weyn ee ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Nile wuxuu ku jawaabay in “shacabka Itoobiya aysan dooneyn in waxyeello ay u geystaan shacabka Masar, in ay wax taraan mooyee”.
Wuxuu intaa ku daray: “Dowladda Itoobiyana waa la mid. Annaga iyo Masar arrimo siyaasadeed oo aan ka wada hadleyno haba yaraatee ma jiraan. Madaxweyne Sisi dhawaan ayaan wada hadalnay maalmaha so socda barri ama saad dambe inaan kulanno ayaan rajeeynayaa inaan ka wadahadalno wixii ay dhibsadeen.”
“Arrinta kale ee sheegesyo in tallaabba aan qaadeyno, sida aad la socotaan shacabka Itoobiya, dal dibadba, waxaan si xushmad leh ugu sheegayaa in afatrii qofba uu mid sabool yahay, waana dhalinyaro, marka xataa haddii Afrika inaan la dagaallanno u baahanno malaayiin ayaan dagaal gelin karnaa.”
Isagoo ka fogaanayay inuu ereyada dagaalka xoojiyo wuxuu yiri “dagaalku xal ma aha, dagaalka Masar-na ma anfacayo, Suudaan-na ma anfacayo, innagana nama anfacayo.”
“Balse haddii ay arrintu tagto jiritaanka dalka iyo calanka, xataa aniga ayaa galayo dagaalka. Wax faa’iida ah lagama helayo, fikirka noocaasi ma aha mid wanaagsan, waxaa wanaagsan in la wada fariisto oo la wada hadlo.”
“Si kastaba ha ahaatee waxaan idiin sheegayaa ineysan jirin cid Itoobiya ka hor istaagi karto iney biya xireen dhisato,” ayuu yiri Ra’isul wasaare Abiy Axmed.
Ra’isal wasaaraha Itoobiya oo ka jawaabayey xorriyadda saxaafadda iyo kaalinta ay warbaahintu ku leeyihiin dhibaatooyiinka ka dhax dhaca diimaha iyo qabiillada iyo dowladda sida ay wax uga qaban la’dahay waxaa uu yiri: “arrinta ku saabsan saxaafadda sanadihii la soo dhaafay, waxay dadaal adag u galeen ayna rabeen sidii ay xor u noqon lahaayeen iyaga oo su’aala bandanna soo gudbiyey”.
“Balse in xorriyad la helo iyo in idaacad xor ah la helo wey kala duwan yihiin, oo su’aal baa ka imaneysa. Arrinta waxay tahay warbaahinta qaar iney noqdaan kuwa ay ka macaashaan dadka qabiilka iyo diinta.”
“Warbaahinta sidi laga rabay ma noqon kuwo dimuqraadiyadda Itoobiya wax ka beddelaya. Xilka ugu badan ee arrintaas wax lagaga qaban karana waxay tahay shacabka Itoobiya, tusaala ahaan, YouTube oo dhibaato badan dalka ku hayo waa iney dadka kala leexiyaan wixii xun iyo wixii san.”
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in “Wakaaladda warbaahinta dalka u xilsaaran iyada oo aan ku xadgudbin dadaalka looga jiro in saxaafadda xor laga dhigo waa inuu sarreynta sharciga u meel mariyaa.”
Gaar ahaanna mulkiilayaasha warbaahinta ee qurbajoogta ah iyo kuwa waddanka u dhashayba, haddii uu meel kaga dhaco nabadda iyo jiritaanka dalka Itoobiya afka uu doonaba ha ku hadlee tallaabba sharci ah inaan ka qaadeyno ayaan u sheegayaa, ayuu u sheegay Baarlamaanka dalkiisa.
“Annagu hal dal ayaan leennahay dalka inuu nabad noo ahaado ayaan dooneynaa haddii aad wanaagga naga caawineysaan waan idiin soo dhaweyneynaa, balse wixii intaa ka baxsan haddii aad ganacsi u adeegsaneysaan waa in aad ogaataan inaan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dalka lagu kaftamin.” ayuu yiri Abiy Axmed.
Itoobiya waxa dhowaan ka dhici doonto doorasho guud, wuxuuna Abiy Axmed aaminsan yahay in “caqabad la’aan aysan dhici karin doorashada oo dhan”.
“Dowladdu waxay u qoondeysay miisaaniyad ku filan oo doorasho xor ah lagu qaban karo iyada oo ay dowladda dhistay guddi madax bannaan oo hoggaamin kara doorasho si xor oo daah furan ku dhacda,” ayuu yiri.
Ra’iisul Wasaaraha wuxuu ku adkeystay in ay ka “go’an tahay iney doorashada si caddaalad oo xor ah u dhacdo”. Wuxuu inta ku daray “shacabka iyo guddiga doorashada oo iskaashada iney suuragelin karaan iney dhacdo doorasha xor ah.”
“Xisbiyada siyaasadeed ee cabashada ka soo gudbiyay sharciga doorashooyiinka, cabashadoodu ma ahayn mid macquul ah, mana aaminsani iney jirto sabab doorashada dib looga dhigi karo.” ayuu yiri Abiy Axmed
Ra’isul wasaaraha Itoobiya oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey khilaafka soo kala dhex galay xisbiga talada dalka haya ee EPRDF wuxuu yiri: “Itoobiya ayaa aabbe u ah EPRDF, marka cidda aaminsan haddii uu xisbigaasi jirin, Itoobiya wey kala tageysaa waa fikir khaldan.”
Isku dhacyada deegaannada
“Wey jiraan ciidama hubeysan iyo hadallo xanaf leh oo ay deegaannadi isdhaafsadaan”, ayuu sheegay Abiy Axmed oo Baarlamaanka dalkiisu ay wax ka weydiiyeen dagaallada iyo rabshadaha u dhexeeya qowmiyadaha.
“Dhibaatooyiinka deegaannada ka dhex dhaca ma ahan kuwa iskood u abuurmay balse waxaa gabbaad ka dhiganaya kooxo raba marwalba iney isku dhacdyadaasi ku dhax dhuuntaan”, ayuu hadalka ku sii daray.
“Dhibaatooyinka ka dhacay Amxaarada iyo Qimaan; Soomaalida iyo Cafarta, waxaa sabab u ah afar tuulo oo la isku haysto inkasta oo ay dagaallada deegaannadaas ka dhacay ay kooxo kale abuureen haddana dowladda dhex sidii dhibaatooyinkaasi xal waara looga gaari lahaa ayey ka shaqeyneysaa,” ayuu yiri Abiy Axmed, Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya.
Madaxweyne Mustafe Iyo Wefti Ballaadhan Oo Uu Hoggaaminayo Oo Gaadhay Degmada Tulli-Guuleed